फेरि शुरु भयो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था : अबदेखि यस्ता गतिविधि गर्न पाइने छैन (सीसीएमसीकाे पत्रसहित)
January 9, 2022 N88LeaveaComment on फेरि शुरु भयो प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था : अबदेखि यस्ता गतिविधि गर्न पाइने छैन (सीसीएमसीकाे पत्रसहित)
काठमाडाैं । सार्वजनिक स्थानमा २५ जनाभन्दा बढी मानिस भेला हुन नपाउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सिसिएमसीको बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ। सार्वजनिकस्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक तथा धेरै मानिस उपस्थिति हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक हकमा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएर गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सार्वजनिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुने गरी […]
मनकामना माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २६ गते साेमबारकाे राशिफल
January 9, 2022 N88LeaveaComment on मनकामना माताकाे दर्शन गरी हेर्नुस् पुस २६ गते साेमबारकाे राशिफल
जान्नुहोस्, सोमबार तपाईको लागि कस्तो रहनेछ। मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्यको हिसाबले केही पुरानो रोगले सताउन सक्छ। धनु (धनु) राशिका व्यक्तिहरूले आर्थिक लाभका नयाँ अवसर प्राप्त गर्नेछन्। वृश्चिक राशि हुनेहरुका लागि सोमबारको दिन राम्रो छैन । मेष: आज सोमबार तपाईको मनोकामना पूरा हुन सक्छ। साथै, व्यापारिक सन्दर्भमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू सुरु गर्न सकिन्छ। उच्च शिक्षा वा रोजगारीका […]
January 9, 2022 N88LeaveaComment on प्राइम टेलिभिजनको स्टिङ अप्रेसनमा आनन्दराज बतास भन्छन्–म शेरबहादुर देउवाको मान्छे हुँ
काठमाडाैं । म शेरबहादुर देउवाको मान्छे हुँ । तर, मेरा तीनवटै काम केपी ओलीका पालामा भएका छन् नि ! कम्युनिस्टहरूले दिन्थे त मलाई ? टेन्डर निकाले, प्राविधिक रूपमा पास भएँ, मैले पाएँ त पाएँ । तपाईंलाई लाग्छ, कांग्रेसका वेला (सत्तामा रहेका वेला) कांग्रेसले मात्र पाउँछ, कम्युनिस्टका वेला कम्युनिस्टले मात्र पाउँछ ? यस्तो हुन्छ र दुनियाँमा ? ब्युरोक्रेसीमा को […]
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने
January 9, 2022 N88LeaveaComment on गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व अब भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी छन् । मेयर दाहालले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले दिएको आर्थिक र प्राविधिक प्रतिवेदनको सरकारी पक्षबाट मूल्यांकन गरिसकेपछि रंगशालाको स्वामित्व भरतपुर महानगरपालिकाले लिने बताएकी हुन् । आइतबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग भरतपुरमा आफ्नै कार्यालयमा कुरा गर्दै मेयर दहालले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले आफूलाई १७ […]
भ्रष्ट नेतालाई ‘फ्याट्टै चिन्ने र ड्याम्म ठोक्ने’ रोबोर्ट बनाउन महाबीर पुनलाई भीम उपाध्यायको आग्रह
January 9, 2022 N88LeaveaComment on भ्रष्ट नेतालाई ‘फ्याट्टै चिन्ने र ड्याम्म ठोक्ने’ रोबोर्ट बनाउन महाबीर पुनलाई भीम उपाध्यायको आग्रह
काठमाण्डौं । हालका वर्षहरुमा नेपाल निकै भ्रस्टाचारमय भयको सर्वेक्षणहरु बाहिरिएका छन् | नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भयको बेलामा त नेपाल झन पहिलो नम्बर मै परेको थियो सबैभन्दा बढी भ्रस्टाचार हुने मुलुक हरुमा जसले जनतालाई आजित लज्जित बनायको थियो | यति ओम्नी मेडिकल सामाग्री खरिद लगायतका थुप्रै काण्डले अहिले पनि उत्तिकै चर्चामा छन् […]
२९ वर्षपछि हुँदैछ शनि र सूर्यबीच यस्ताे दुर्लभ संयाेग, हेर्नुस् राशिमा कस्ताे प्रभाव पर्नेछ !
January 9, 2022 N88LeaveaComment on २९ वर्षपछि हुँदैछ शनि र सूर्यबीच यस्ताे दुर्लभ संयाेग, हेर्नुस् राशिमा कस्ताे प्रभाव पर्नेछ !
काठमाडाैं । यसपटक मकर संक्रान्तिमा सूर्य र शनि सँगै बस्ने भएका छन् । ज्योतिषका अनुसार २९ वर्षपछि यस्तो संयोग हुन लागेको हो । सूर्य र शनिको यो दुर्लभ संयोजनले सबै राशिहरूमा प्रभाव पार्नेछ। माघे सकराती अर्थात मकर संक्रान्ति यस वर्ष जनवरी 14 मा पर्न गइरहेको छ। यस दिन सूर्य मकर राशिमा शनिको राशिमा प्रवेश गर्नेछ। […]
काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल स्मार्ट लकडाउन !
January 9, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल स्मार्ट लकडाउन !
काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमणको संख्या बढ्दै गए स्मार्ट लकडाउनसम्म गर्न सकिने बताए पनि काठमाडौं उपत्यका जिल्लाहरुमा स्मार्ट लकडाउनबारे कुनै छलफल भएको छैन् । केही दिन अघि सिंहदरबारमा बसेको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)निर्देशक समितिको बैठकमा ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमणको संख्या बढ्दै गए आवश्यकता अनुसार स्मार्ट लकडाउन गर्ने बिषयमा छलफल भएको थियो । […]
गठबन्धन भत्काउने गरी ओलीको रणनीति, प्रचण्डलाई ‘हनहनती ज्वराे’
January 9, 2022 N88LeaveaComment on गठबन्धन भत्काउने गरी ओलीको रणनीति, प्रचण्डलाई ‘हनहनती ज्वराे’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पाँच दलीय गठबन्धनका कारण झस्किएका छन् । एकपछि अर्को धक्का खान थालेपछि उनी झस्किएका हुन् । गठबन्धनमा कुनै अन्तर्घात नभए राष्ट्रियसभाको १९ सिटमा एमालेलाई नराम्रो धक्का लाग्न सक्छ । यसको असर आगामी वर्ष हुने तीन तहको चुनावमा पर्न सक्छ । यसैलाई दृष्टिगत गरी ओली गठबन्धन […]
देउवा ओलीलाई भेट्न घरमै गएपछि यता प्रचण्डलाई ‘हनहनती ज्वराे’, माओवादीका यी नेता पनि परे थला !
January 9, 2022 N88LeaveaComment on देउवा ओलीलाई भेट्न घरमै गएपछि यता प्रचण्डलाई ‘हनहनती ज्वराे’, माओवादीका यी नेता पनि परे थला !
काठमाडौं । अहिले देशको मौसम बिग्रिएको छ । आकाशतिर फर्किदा अहिले नै पानी चुहिन्छ कि जस्तो छ । अर्थात् मौसम ठीक छैन । देशको राजनीति पनि ठीक त्यस्तै छ । बिग्रिएको छ । शीर्ष दलहरुले महाधिवेशन त गरेका छन् तर त्यसले राष्ट्रिय एकताको राजनीतिलाई फरक पारेको छैन । अर्थात् संसद अवरुद्ध छ । सरकारले संसदमा […]
गठबन्धन भत्काउने गरी ओलीको रणनीति
January 9, 2022 N88LeaveaComment on गठबन्धन भत्काउने गरी ओलीको रणनीति